Global Voices teny Malagasy » Saina fotsy: Misaona ny Sri Lankey · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Mey 2019 5:47 GMT 1	 · Mpanoratra GroundViews Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, Sri Lanka, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika, Voina, Zon'olombelona
Ity lahatsoratra nosoratan'i Amalini De Sayrah  ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny tranokalan'ny Groundviews, tranonkala fampitam-baovaon”olo-tsotra efa nahazo loka tao Sri Lanka. Navoaka etsy ambany ny dika nasiam-panitsiana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty amin'ny Global Voices.
Namono olona an-jatony nivavaka tamin'ny Alahadin'ny Paska 21 aprily 2019 tany Sri Lanka ny andiana daroka baomba nomanina . Anisan'ireo toerana enina lehibe voadaroka baomba ny fiangonana telo: ny fiangonana St. Anthony ao Kotahena, St. Sebastian ao Katuwapitiya sy ny Fiangonana Ziona ao Batticaloa. Nangonina tamin'ny 22 Aprily, iray andro taorian'ny fanafihana ny sary sy ny resadresaka manaraka.
Ny toerana masina katôlika malaza no voalohany tamin'ireo andiana daroka baomba  nipoaka tamin'io andro io. Manjelatry ny masoandro ireo korontan-javatra tamin'ny fipoahana – vakim-pitaratra nanarona ny sarivongana lehibe teo amin'ny tarehin'ny fiangonana, ary ny fitaratra fiarovana teo amin'ny varavarana lehibe – raha mandeha eny amin'ireo korontan-trano rava ny polisy, ny tafika ary ny mpitsabo.
Miorina ao Kotahena , tanàna itatry ny renivohitr'i Sri Lanka, nanjary toeran'ny mpitsoa-ponenanana ho an'ny finoana rehetra ao Sri Lanka ny toerana masina. Marobe ireo alahelo taorian'ny fipoahana.
Nandray anjara tamin'ny fiareta-tory kely nokarakarain'ny vondron'olon-tsotra mahaleotena, izay natao tao amin'ny tsangambaton'ny jobily 150 taona, atsimon'ny toerana masina ihany koa ilay lehilahy. “Rariny, fa tsy valifaty”, hoy ny vakin'ny sora-baventy, ary misy ireo labozia mirehitra manohitra ny rivotra mitsoka. Adiny iray mahery taty aoriana, dia nipoaka  ny kamiao kely iray nijanona teo akaikin'io toerana io raha nandrava baomba hita tao anatin'izany ny ekipa mpandrava baomba avy ao amin'ny Vondron-tafika manokana – Special Task Force (STF) manokana.
Milaza ireo mpitarika masikiriny fa niharan'ny fanafihana  nataon'ny havanan'ireo olona maty tamin'ny fipoahana alahady ny fianakaviana Pakistaney. Nanafika sy nitora-bato ny tranon'izy ireo, namaky ny varavarankely tamin'ny vato izy ireo. Mpitsoa-ponenana izay samy ao amin'ny fiarahamonina Miozolomana Ahmadi na ny finoana Kristiana izay mandositra ny fanenjehana any Pakistana ireo fianakaviana ireo. Nanatona ny polisy Negombo avy eo ireo fianakaviana ary nangataka ny hametrahana fiarovana eo an-toerana – fangatahana izay nolazain'ireo mpitarika fa neken’ ny polisy.
Nivoaka ny fanambarana momba ireo nanao ny fanafihana, ary miha- mahasosotra kokoa ireo fanehoan-kevitra ara-politika avy amin'ireo tompon'andraikitra ambony indrindra ao amin'ny firenena, saingy mbola mitohy mandritra ny andro vitsy manaraka ny fandevenana. 253  ankehitriny no notaterina fa fitambaran'ny namoy ny ainy vokatry ny fanafihana tamin'ny 21 Aprily ary mbola miakatra hatrany izany isa izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/03/138140/
 andiana daroka baomba nomanina: https://groundviews.org/2019/04/22/easter-sunday-attacks-key-updates/
 fiangonana St. Anthony ao Kochikade, Kotahena (Colombo 13): https://en.wikipedia.org/wiki/St._Anthony%27s_Shrine,_Kochchikade
 andiana daroka baomba: https://globalvoices.org/2019/04/21/a-series-of-bomb-attacks-on-churches-and-hotels-bring-terror-in-sri-lanka/
 niharan'ny fanafihana: https://www.nst.com.my/world/2019/04/482878/muslims-flee-christians-grieve-sri-lankan-town-torn-violence